हुलास वायर श्रमिक प्रकरणः श्रम ऐन विपरित निकालिएका ९३ कामदारलाई १५ हजार दिएर विदा गर्ने उद्योगको प्रस्ताव, मजदुरहरु थप आन्दोलित
विराटनगर, २५ असार । मोरङको बुढीगंगा–३ स्थित हुलास वायर इण्डष्ट्रीजका श्रमिकहरु चारदिनदेखि आन्दोलित भएका छन् । सरकारी मापदण्ड अनुसारको सेवा सुविधा माग गर्दै श्रमिकहरुले श्रम कार्यालय मोरङमा उजुरी गरेका थिए ।
त्यसपछि उद्योगले ९३ जना कामदारलाई निष्कासन गरेको थियो । लामो समयदेखि उद्योगमा कार्यरत श्रमिकलाई सरकारी मापदण्ड अनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै श्रमिकलाई निष्कासन गरेपछि उद्योगमा कार्यरत ७ सय बढी मजदुर चारदिनदेखि आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले उद्योग ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
मजदुर संगठन र उद्योगबिच सहमति गर्ने उद्देश्यका साथ वार्ता भएपनि वार्ता टुंगो नलागेपछि श्रमिकहरुले आन्दोलन थालेको हुलास वायर इण्डष्ट्रीजमा कार्यरत मजदुर सुर्य कुमार गिरीले बताए ।
उनका अनुसार शुक्रबार उद्योग प्रशासन र श्रमिकका प्रतिनिधिहरुबिच बार्ता भएको थियो । सो वार्तामा उद्योग प्रशासनले समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि उल्टै दुई महिना वापतको पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ मात्र दिन सकिने र निकालिएका कामदारलाई पुनः काममा नराख्ने बताएपछि श्रमिकका प्रतिनिधिहरु आक्रोसित हुँदै वार्तास्थालबाट बाहिरिएका थिए । ‘निकालिएका श्रमिकलाई दुई महिनाको १५ हजार दिन्छौ र फेरी काममा राख्दैनौँ उहाँहरुले भन्नुभयो ।’ उनले हाम्रो विराटनगरसँग भने,‘२२÷२३ वर्षदेखि काम गर्दै आएकालाई कसरी हटाउने? श्रम ऐनले हटाउन दिन्छ ? जिग्दगी त्यहि वितिसकेपछि अहिले निकाल्न मिल्दैन, त्यस्तो कुरा नगर्नुस अब हाम्रो आन्दालन अझ कडा रुपले जारी रहन्छ भनेर हाम्रा प्रतिनिधिहरु निस्कीनुभयो ।’
उद्योगमा कार्यरत मजदुर जंगलाल चौधरीले ६ महिना काम गरेपछि नियुक्ति पत्र र न्युनतम पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा पाउनुपर्ने सरकारी नियम भएपनि २२ वर्षदेखि कार्यरत मजदुरलाई पनि सरकारी मापदण्ड बमोजिमको सेवा सुविधा समेत नदिएको बताए । उनका अनुसार सो उद्योगमा ७ सय ५० बढी कामदार कार्यरत छन् ।
उद्योगले कयाँैपटक समय माग गदैै श्रमिकहरुको माग सुनुवाई नगरेका कारण आन्दोलनको विकल्प नभएको उद्योगका कार्यरत श्रमिकहरुले बताएका छन् ।
उद्योगका कार्यरत अर्का श्रमिक गेनुलाल माझीले उद्योगले निष्कासन गरेर रोजगारविहिन बनाएका श्रमिकहरुको साथमा सवै श्रमिकहरु रहेको बताए । उनले निष्कासन गरिएका श्रमिकलाई पुनः रोजगारी प्रदान नगरिएसम्म काम नगर्ने बताए । आन्दोलनरत श्रमिकहरुले तोकिएको मापदण्ड अनुसारको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने र रोजगारविहिन बनाइएका मजदुरहरुलाई पुनः रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।